I-US / 16A (3.6KW) Abavelisi kunye nabaXhasi | Ifektri yase China / 16A (3.6KW)
Level2 5meter 16A Uhlobo 1 EV Charger for Vehicle Vehicle Ukutshaja Cable
China Ixabiso eliphantsi China EV itshaja, Umbane Ukutshaja Cable, Singabanika abaxumi bethu izibonelelo ezipheleleyo kumgangatho wemveliso kunye nolawulo lweendleko, kwaye ngoku sinoluhlu olupheleleyo lomngundo ukusuka kwikhulu leefektri. Njengokuhlaziywa kwemveliso ngokukhawuleza, siyaphumelela ekuphuhliseni izinto ezininzi ezikumgangatho ophezulu kubathengi bethu kwaye sifumane udumo oluphezulu.
Inqanaba lesi-2 i-EV yetshaja yohlobo lwe-1 Outlet 16A 3.5kw
Sibaxhasa abathengi bethu ngeemveliso ezisemgangathweni ophezulu kunye neenkonzo zenqanaba eliphezulu. Ukuba ngumvelisi oyingcali kweli candelo, ngoku sifumene amava okusebenza anempumelelo ekuveliseni nasekulawuleni i-OEM Supply China 16A SAEJ1772 Icandelo lokutshaja imoto yombane ngohlobo lwe-1 Cable, sigcina iishedyuli zokuhambisa ngexesha elifanelekileyo, uyilo olwenziweyo, umgangatho ophezulu kunye nokwenza izinto elubala abathengi. Imoto yethu kufuneka ibe kukubonelela ngeempahla ezisemgangathweni ngaphakathi kwexesha elimiselweyo.